Somalia online: Kenyatta oo ka dalbadey Marekanka iyo Midowga Yurub inay xoojiyaan dhismaha ciidamada milatariga Soomaaliya
Kenyatta oo ka dalbadey Marekanka iyo Midowga Yurub inay xoojiyaan dhismaha ciidamada milatariga Soomaaliya
Posted on July 24, 2016RBC, Wararka
Nairobi (RBC Radio) Madaxweynaha dalka Kenya,Uhuru Kenyatta ayaa ka dalbaday dowladda Marekanka iyo ururka Midowga Yurub inay xoojiyaan doorkooda ay ku caawinayaan Soomaaliya sidii ay u dhisi laheyd ciidamadeeda,taaso sura-galinaysa in laga hortago khatarta amniga ee ay dalka ku hayaan kooxda al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay kordhiyaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay maalintii Jimcaha kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika, Linda Thomas-Greenfield oo booqaneyso Kenya.
War-saxaafadeed laga soo saaray kulanka Mr. Kenyatta iyo Linda Thomas ayaa lagu xusay in Kenya ay ku boorrineyso dalalka uu Mareykanka kamid yahay in ay xoojiyaan dadaalka dhismaha ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee Soomaaliya si ay gacan buuxda ugu qabtaan nabadda dalka.
Linda Thomas-Greenfield oo iyadina kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in Mareykanka ka jawaabay dalab uu madaxweyne Uhuru Kenyatta u gudbiyey Qaramada Midoobey oo ku aaddan in la kordhiyo gargaarka militari ee la siiyo Soomaaliya.
Waxaa ay sheegtay in Mareykanku qaadayo qorshe lagu mideynayo dhammaan dalalka dhinaca militariga ka taageerra Soomaaliya si taageeradaas meel la isugu geeyo.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ballaaran ugu jirta dhismaha iyo tayeeynta ciidamada qalabka sida si ay si buuxda ammaanka dalka ula wareegaan marka ay baxaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.